Fomba hanovana mora foana ny endrik'olona amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ny famolavolana dia a loharano ankehitriny amin'ny ankamaroan'ny masoivoho rehetra ankehitriny. Azontsika atao aza ny milaza fa ity sehatry ny fahalalana ity dia nanjary singa ilaina amin'ny varotra varotra vokarin'ny orinasa.
Ary eny, ny zava-dehibe indrindra ny singa hita maso ankehitriny raha ny marketing sy ny varotra no resahina, noho izany, ny ankamaroan'ny orinasa dia manandrana manana ny singa rehetra hita maso ho azy ireo, manao ny famolavolana sary ho kariera amin'ny sehatry ny asa be.
Noho izany, ny asa famolavolana dia nahavita nandrakotra an-tsaha maro, lasa iray amin'ireo asan'ny fotoana.
Afaka manampy an'io koa isika fiaviana ara-javakanto izay hitantsika amin'ny famolavolana, izany no antony ahafahana mahita mpanakanto marobe miasa amin'ny famolavolana sary, fanaovana endrika na asa asa na asa kanto. Io dia iray amin'ireo taranja mahafinaritra indrindra misy, na izany aza, tsy misy antony tokony hamaivanina azy io, satria toy ny asa rehetra, amin'ny endrika dia ahitantsika ny karazana olana sy fahasarotana be pitsiny.
Androany izahay dia mitondra ny iray amin'ireo teknika be mpitady indrindra amin'ny sehatry ny famolavolana, manova tarehy ary hampiharihary fohifohy ny dingana tokony harahina hahafahana manatanteraka ny fanovana ny tarehy amin'ny sary iray mankany amin'ny iray hafa.
Fampianarana hanovana ny endrik'olona
Manokatra ireo sary roa hiarahanay miasa izahay.
Ovainay ho mainty sy fotsy ireo sary miloko. Raha tsy hainao ny manao an'io dia mankany amin'ny Menu izahay - Fanontana - Mode ary manova ny maody RGB izahay by grayscale
Misafidy ny fitaovana lasso izahay ary mifidy ny tarehy.
Tarihintsika ny sary hafa (izay heverina ho endrika tiantsika hapetraka) amin'ny sary hafa.
Manaova a fifantenana ny tarehy izay ho fonenanay ary apetaho amin'ny sosona hafa. Tsindrio havanana - Layer amin'ny alàlan'ny kopia.
Mampifanaraka ny lokon'ny tarehy roa izahay
Misafidy sosona 1 isika: Menu Menu - Fanitsiana - lokon'ny lalao.
Ao amin'ny tontonana lalao miloko safidio ny sary amin'ny loharano ary ao amin'ny sosona 2 sosona ary tsindrio OK.
Efa manana tarehy roa mitovy izahay, ka afaka manaraka izany esory ny sosona 2 na afeno.
Apetrantsika eo ambonin'ilay tarehy any ambadika ny sosona 1, ilaina amin'ny fampidinana ny opacity ary afindra mandra-pahatongan'ny toerana mety.
Mamorona sarontava amin'ny sosona 1, safidio ny borosy malefaka ary hosodoko ny saron-tava mandra-panaontsika ny tarehy iray manontolo.
Ary voila, hanana endrika vaovao tanteraka amin'ny endritsika isika. Ny dingana dia mety ho somary mandreraka, noho izany mila faharetana avy amintsika ny fizotranyNa izany aza, tsy inona izany fa ny hanoratanao an-trano, noho izany ny mpampiasa dia afaka amin'ny alàlan'ny fandinihana fampiharana sy hianatra bebe kokoa ny fomba fiovan'ny tarehy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Fomba hanovana mora foana ny endrik'olona amin'ny Photoshop